Ajụjụ - N'ogbe diffusers maka Mkpa mmanụ | AromaEasy
1: you bu ndi ahia ma obu ahia ahia?
Anyị bụ onye nrụpụta, na-enye ọrụ OEM & ODM.
2: Gini bu isi ahia gi?
North America gụnyere US na Canada; Karisia Europe gụnyere Germany, France, UK, Spain na Italy; South East Asia gụnyere Mainland China, Japan, Korea,
3: Kedụ ụbọchị nnyefe maka atụ?
Otutu ihe dika ubochi 1-3 site na UPS, FedEx ma obu DHL maka ihe nwere otutu ihe.
4: Ngwaahịa gị hà na-agbaso ụkpụrụ anyị?
Eeh, Ngwaahịa niile sitere na Aromaeasy nwere asambodo nke ISO 9000, OA, ETL, ROHS, SASO wee gafee nyocha nke ụlọ ọrụ BSCI / UL, wdg.
5: Kedụ ka esi ejikwa njikwa a?
Anyị na-ejikwa njikwa ngwaahịa site na IQC, QA na ahịrị mmepụta, ule 100% ịka nká tupu ịkwakọ, yana FQC tupu ịkwakọ ngwaahịa ndị emechara. Anyị na-agbasochi ụkpụrụ ịdị mma niile nke ISO 90001 setịpụrụ.
6: Kedu ihe MOQ?
Dịka ọ dị anyị MOQ bụ 500PCS, mana 1000PCS maka ụdị ọhụụ, yana obere iwu ikpe maka ụfọdụ ihe na-anakwere.
7: Olee otu i si ebupu ngwongwo ma ogologo oge ole ka ọ na-ewe?
Anyị na-ebugharịkarị site na DHL, UPS, FEDEX, TNT. Ọ na-ewekarị ụbọchị 4-5 ụbọchị iji rute. Site n'ikuku, site n'akụkụ oke osimiri na-anakwere.
8. Kedu ihe bụ akwụkwọ ikike gị
1 afọ akwụkwọ ikike, otu afọ ogologo karịa ndị ọzọ! Alaka anyị dị na Los Angeles ga-enye ọrụ ọkachamara ma a rụchaa ahịa.
9. you nabatara iwu OEM & ODM?
N'ezie, anyị nwere. MOQ bụ 1000pcs maka ọrụ ahaziri (gụnyere agba, Logo, ngwugwu, ihe nlereanya ọhụrụ).
10.How banyere oge idu gị?
Maka ịlele 7 ụbọchị.
Ọ bụrụ n’etinye usoro n’usoro kachasị elu, ikekwe ọ ga-anọ ogologo oge. Mana anyị ga-eme ike anyị niile iji rute ihe ị chọrọ.
11. o ga - enye ndakpu ìsì - ma ọ bụ na - eziteghị akwụkwọ ọnụahịa na ngwa ahịa ọ bụla metụtara gụnyere gụnyere ma ọ bụ na nkwakọ ngwaahịa ahụ?
12.Ga ị na-enye ndenye ọsụsọ - ọnụ ahịa ụlọ ahịa anyị na-ere ugbu a buru oke ibu iji debe iwu n'otu n'otu?
13.I nwere MOQ (Nke pere mpe Mpempe Iwu) achọrọ maka ngwaahịa gị ọ bụla?
1pc opekata mpe maka ihe anyi nwere nchekwa.
14. re nwere ike izipu akwụkwọ ọnụahịa maka nnukwu mmiri na-ada ada ozugbo na Alipay?
15.Anyị nwere ike ịmepụta nkwakọ ngwaahịa nke anyị?
Ee. Ma ga tinye n'ime ọnụ ahịa ma ọ bụrụ na igbe agba agba akwụkwọ ga-achọ MOQ1000.
16. an nwere ike ịgụnye mmanụ dị mkpa n’otu iwu ahụ?
Eeh, ma mbupu ụgwọ maka mmanụ dị mkpa nwere ike ọ ga-efu ọnụ.
Olọ ọrụ anyị ga-achọ izitere gị faịlụ Spreadsheet (CSV) na ozi onye ahịa ọ bụla (aha, email, adreesị, ngwaahịa, wdg) ma mee ka usoro hazie n'otu n'otu site na iziga onye ahịa ọ bụla ngwaahịa ha kwesịrị ekwesị.
Ee, anyị nwere ike ijikwa nke ahụ.
18. I gha eziga ndi ulo oru anyi nziputa ego maka ego ihe otutu, nke anyi ji obi uto kwuo site na Alipay ma obu Paypal.